Been Abuurka Haaruun Macruuf | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Been Abuurka Haaruun Macruuf
Been Abuurka Haaruun Macruuf
Waxaan dhagaystay Barnaamij la magac baxay Galka Baarista oo uu wadey Shaqsi lagu magacaabo Haaruun Macruuf.
Barnaamijkaas ayaa dambi weyn oo been abuur ah ka galey Gobolka Gedo.
Sida Luuqadda Haaruun uu adeegsanayo ka muuqata Barnaamijkaan Galka Baarista la magac baxey ee Gobolka Gedo uu uga hadlayey waxaa muuqata inuu yahay mid Maalgalin ka heley Madaxweynihii Hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Haaruun wuxuu barnaamijka dhexdiisay ku qirayaa in Axmed Madoobe ku guuleystay Doorashaddii uu isla galey isagu?
Wuxuu isla barnaamijka dhexdiisa ku muujinayaa inuu Axmed Madoobe yahay Madaxweynaha Jubbaland ee la doortey taasoo ka dhigan Wariye Xayeeysiin loo dhiibey.
wuxuu qirayaa in Gobolka Gedo u kala qeybsanaa laba Qeybood oo wuxuu tusaale usoo qaatey Degmooyinka Daawo, Dooloow,Luuq iyo Baladxaawo.
Wuxuu isla Barnaamijka ku sheegayaa in Dowladda Soomaaliya Xoog kula wareegtey Gobolka Gedo taasoo ka hor imaanaysa kala qeyb sanaantii uu ku sheegey Barnaamijkiisa,
Haaruun macruuf iyo Barnaamijkiisa Galka Been Abuurka waxaa ka Muuqata inuu yahay mid dambi weyn ka galey Gobolka taasoo aan ku cadeeynayo Qoraalkan.
Gobolka Gedo Dowladda Kenya waxaay ka gaysatay tacadiyo Burburin iyo barakicin Umadeed isugu jira.
Gobolka Gedo Dowladda Kenya maalinta aay rabto ayey Baladxaawo dad ku leeynaysay kadibna ka baxaysay Xuduudana Dhisanaaysay..
Dowladda Kenya waxaay geeysatay Duqeeymo ka badan inta aay Shabaab u geeysatay taasoo ku tusinaaysa in Cadaawad gaar ah Dowladda Kenya Gobolkaas u qabtey.
Waxaay Dowladda Kenya Burburisay Anteenooyinkii Soomaalida ee Hormuud iyaddoo taas badalkeeda Safarikom oo ah Shirkad Kenyan ah aay maanta Gobolka Gedo meel walba Anteenadeedu joogto.
Dowladda Kenya waxaay wiiqdey Adeegii EVGa ee Soomaaliddu ku nooleyd una aheyd isha kaliya ee Gobolkaas oo dadku isku caawin jireen taas badalkeeda Magaaladda Kismaayo waxaa ka shaqeeya Adeega EMBESA oo ah adeeg Dowladda kenya leedahay oo Shirkadda Safarikom aay fududeeysay.
Degmooyinka Dooloow,Baladxaawo iyo Luuq dadkoodu waxaay ahaayeen dad aan hadlin,wax arkin waxna maqlin!!!
In Dowladnimo 30 Sano kadib soo gaartey miyaadan ogeyn?
Haaruun Macruuf wuxuu iska indho tirey Tacadiyadda Gobolka ka jirey isagoo aan fiirinin, Qiimeeyna In Dowladda Dhexe aay Masuul ka tahey Dalka oo dhan oo aay Xitaa iyadu Masuul ka tahay Xuduudaha.
Wuxuu Barnaamijkiisa Galka Been Abuurka ku taageerey Dowladda Kenya Burburinta, Tacadiga iyo xadgudubka ay qaranimadeena ku heeyso.
Haaruun Macruuf waxaa igu maqaala ah inaad kamid aheyd Soomaali Eboowdii Dowladdii kacaanku Jigjiga kasoo daad gureeysay 1977kii halkaasna Dowlada Soomaaliya ay kugu kafaalo qaadey.
waxaa nasiib darro ah inaad Been abuur iyo garabsiin Maamul waqtigiisii dhamaadey aad ku dulmiso Gobol Tacadiyo waa weyn oo Dowlada kenya ka geeysatay.
Galkaaga Baaristu ama Been Abuurku Muuqaaladda iyo Sawiradda aan soo bandhigey ha daalacdo.
Galkaagu Baaristu bal ha Daawado Hooyadaan masaakiinta ah ee Dowladda Kenya aay Baabi’isey ubadkeedii iyadana naafada baday.
Waxaan Aaminsanahay Dowladda dhexe Saraakiisha horboodaya Xasilinta Gobolka Gedo iyo guud ahaan Jubbaland inaay istaahilaan Bilado iyo Abaalmarino.
Hooyadda Xuduuda Baladxaawo Joogta oo Subax walba indhaheedu qabtaan Askariga Soomaaliga ah ee Xaduuda gaaf wareegaya kana ilaalinaya in Kenyanku kusoo xadgudbaan Xuduudeena ayaa dareemi karta Muhiimadda Ciidanka Gedo Jooga.
Hadaad Gorod diidan tahay
Ku koob dirirtaada Gorrod”
”Ha nicin gobolkuu ka yimid”
”Ha giijin xargaha ha jarin”
”Ha goyn waxa laysu yahay”
Haddii Aad Fahad Diidan tahay ha nicin Gobolkuu ka yimid ku Koob dirirtaada Fahad.
Cali Yaasiin Gurbe
Previous articleLaamaha Amniga Soomaliya oo Fashiliyey Qarax Miino lagu aasay wado ku taalo Muqdisho
Next articleDowlada Federaalka Soomaliya oo ku dhawaaqsay xiliga Dulimaadyada Gudaha la Furaqyo
“Waxaan ku talinayaa howsha Jowhar ka socota mid la mid ah...